Accueil > Gazetin'ny nosy > Andry Rajoelina : Tsy tia olon-kendry sy manam-pahaizana
Andry Rajoelina : Tsy tia olon-kendry sy manam-pahaizana
Milaza miara-mahita isika fa manana eritreritra ny handrava ny Antenimierandoholona na ny «Sénat» ingahy Andry Nirina Rajoelina. Hatramin’ny niverenany avy any Frantsa nanorim-ponenana tany taorian’ny fitsanganan’ny repoblika fahefatra ny taona 2013 izany. Tena nahagaga ny fihetsik’ingahy Andry Nirina Rajoelina rehefa tonga teto Madagasikara ny taona 2018 fa nanao filazana tamin’ny haino aman-jery sy tamin’ny alalan’ny fahitalavitra fa raha tafaverina amin’ny fitondrana izy dia horavany ny «Sénat» fa mandany vola fotsiny hono. Nefa ity filoham-pirenena ity no nandrafitra sy nampifidy ny Lalàmpanorenana izay misy amin’izao fotoana izao tamin’ny taona 2010. Raha tadidintsika ny toe-draharaha tamin’ireny fotoana ireny fa natao amboletra fotsiny ny fifidianana io Lalàmpanorenana io ary noterena ankolaka ny Malagasy ny hifidy azy.
Iaraha-mahalala fa sokajian’izao tontolo izao ho olon-kendry ny senatera. Izany no antony isian’ity andrim-panjakana ity ho an’ny firenena izay manaja ny fisian’ny fifandanjam-pahefana eo amin’ny Antenimierampirenena sy ny filohan’ny repoblika ary ny filohan’ny governemanta mba hisian’ny demôkrasia.
Tsy tia olon-kendry tokoa ingahy Andry Nirina Rajoelina satria voaporofo izany tamin’ny fomba nataony tamin’ny fahatongavan’ny raiamandreny ara-drazana izay tompon’ny fahendrena sy ny hasin’ny maha-Malagasy. Tsy navela hiditra tao amin’ny lapam-panjakan’Iavoloha ireo ampanjaka sy andriana ary tangalamena miisa 72 mianadahy avy amin’ny lafivalon’ny Nosy, izay nanome voninahitra azy sy ny hanome ny hasina azy araka ny fomba maha-Malagasy. Ilay voalaza fa mpandrindra ny arofenitra teny Iavoloha tamin’ny faha 19 janoary 2019 antsoina hoe Michou dia namingavinga ireo raiamandreny lehibe eto amin’ny firenena ireo, ary notendrena ho mpiasan’ny Masoivoho any Parisy rehefa nahavita izany. Voatery niala an’i Iavoloha moramora ireo olona ireo rehefa niandry nandritra ny adiny efatra teo antokotanin’ny lapa. Hita soritra teny amin’ny endrik’ireo raiamandreny ara-drazana ireo ny alahelony noho izao nanaovana azy izao.
Voatery nandray ny ampahefatr’ireo olona ireo ingahy Rajoelina ny alahady maraina noho ny resabe nandeha sy ny hatezeran’ny olona maro tamin’izany.
Ankehitriny dia voailikilika ny olona efa zokinjokiny miasa any amin’ny ministera rehetra any. Omena ny tanora hono ny sehatra. Tena tsara izany saingy ny tanora anie ka maro no mbola tsy manana traikefa sy fahaizana hanao izany asa izany. Izany no nampisy ny olana teo amin’ny SECES (Sendikan’ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra) teny amin’ny oniversite Antananarivo farany teo. Ireo izay mihoatra ny 60 taona hono dia saika horoahina sy tsy havela hiasa intsony avokoa. Dia tena mahamenatra ny raharaha satria ny oniversite eran-tany dia manome vahana ny zokiolona izay manana traikefa ary manome sehatra ny tanora hita fa miezaka koa. Ampiezahana ny tanora mba hanana ny traikefa farafaratsiny mitovy amin’ireo mpampianatra teo alohany mba tsy hisian’ny fihemorana aoriana amin’ny firenena ka tsy maintsy mifanindran-dalana ny fahaizana sy ny fahendrena vao izay vao azo antoka fa hisy firenena vanona.
Mahagaga fa notetehin’ingahy Andry Nirina Rajoelina izay sy ingahy Ntsay Christian hofoanana ireo mpampianatra ireo. Tena famonoana firenena tanteraka no kendren’izy roalahy ireo amin’izany.
Mahakasika manokana ny tsy fitiavana olona manam-pahaizana indray dia mazava ho azy ny resaka. “Diaspora” na ireo Malagasy mpifindra monina tsy voaray hiasa tany ivelany ireo no maro manodidina ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Matoa izy ireny nirenireny sy tsy nanana asa tany dia sady tsy mahay no tsy manam-pahendrena. Ireo nefa no milaza azy fa tompon’ny IEM.
Ankoatr’izay dia tsy mitady manam-pahaizana hanolo-tsaina azy izy. Hatramin’izao dia olona dimy ihany no voatendry ho “Chargé de mission” na ireo mpanao iraka eny amin’ny fiadidiana ny repoblika izay misolo toerana ny antsoina hoe “Conseiller spécial” na “Conseiller à la présidence”. Mpanakanto roa no noraisiny amin’izany ary mpandraharaha iray ary administratera sivily iray. Tsy mahagaga raha toa ka mivaralila ny fanjakana ankehitriny amin’ny ankapobeny satria na inona na inona fomba fijery dia tsy hahasahana ny fampandehanana ny raharaham-pirenena ireo ary hanolo-tsaina azy.
Tsy “génie” na “superman” ingahy Andry Nirina Rajoelina ka mahay ny zavatra rehetra?
Raha vao miresaka amin’ny fanjakana misy amin’izao fotoana izao isika dia lazaina fa zava-dehibe ny fitsitsiana. Tsy misy resaka tenenina raha tsy ny vola. Ny vola no mibaiko izao fanjakana tarihin’ingahy Andry Nirina Rajoelina izao. Tsara ny manam-bola ary tena ilaina izany saingy ngezabe ny mahay sy ny hendry.
Raha tena mitsitsy marina ny fanjakana io tsy tokony hasondrotra 420 erô ny “indemnité” ny mpiasam-panjakana sy ny mpitondra hamita iraka any ivelany raha toa ka 350 erô isan’andro izany teo aloha. Raha tena hitsitsy ihany ingahy Andry Rajoelina sy ny fitondrany dia tsy tokony ho hihoa-pampana ny tambin-karama sy ny karaman’ny ministra ireo izay tombatombanana any amin’ny 20 tapitrisa ariary ny fitambarany isam-bolana.
Ny fanjakana tsy mahay mampiasa ny olo-kendry sy ny manam-pahaizana dia tsy maintsy rendrika. Ny tsy fitiavana mampiasa ireo olona ireo koa dia taratra ny fanjakana te-hanao didy jadona. Tsy mandehandeha foana ireny fikasana hanova Lalàmpanorenana ireny fa ao raha…
Jereo ny manodidina anao ry Malagasy fa be dia be no olon-kedry sy ny manam-pahaizana Malagasy no mipetra-potsiny ankehitriny satria tsy te hiara-miasa amin’izy ireny hono ingahy Rajoelina Andry Nirina fa ny mpanam-bola ihany no tokony hahazo laka.